आईपिएलमा पञ्जाव माथि राजिस्थान राेयलकाे शानदार जित – Paluwa Khabar
कार्तिक १५, २०७७ शनिबार 51
बर्दिया कात्तिक १५ । यूएईमा जारी १३औं संस्करणको आईपीएल टी-ट्वान्टी क्रिकेटमा राजस्थान रोयल्सले किङ्स इलाभेन पन्जाबलाई पराजित गरेको छ । आबुधाबीमा शुक्रबार राति भएको खेलमा राजस्थानले पन्जाबलाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो ।
पन्जाबले दिएको १८५ रनको लक्ष्य राजस्थानले १७ ओभरमै भेटेको हो । विशाल लक्ष्यलाई राजस्थानले १७ ओभर ३ बल खर्चिदा ३ विकेट मात्र गुमाएको थियो ।​
राजस्थानका लागि बेन स्टोक्सले सर्वाधिक ५० रन बनाए । सन्जु सामसन ४८, रोबिन उथप्पाले ३० रन बनाउँदा कप्तान स्टिभ स्मिथ ३१ र जोस बट्लर २२ रनमा अविजित रहे । पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको पन्जाबले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १८५ रन बनाएको थियो । राजस्थान विजयी हुँदा पन्जाबका लागि क्रिस गेलले बनाएको ९९ रन खेर गयो ।
शतक बनाउन एक रनले चुकेका गेलले ६३ बलमा ८ छक्का र ६ चौका हानेका थिए । शतक नपुग्दै विकेट झरेपछि उनले मैदानमै ब्याट फालेका थिए। पञ्जाबका लागि कप्तान केएल राहुल ४६, निकोलस पुरन २२, ग्लेन म्याक्स्वेलले अविजित ६ रन बनाउँदा मन्दिप सिंह शून्य रनमा आउट भए । ​
राजस्थानका बेन स्टोक्स र जोफ्रा आर्चरले २र२ विकेट लिए ।विशाल लक्ष्य पछ्याएको राजस्थानले पन्जाबलाई हराएसँगै तालिकाको पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ। उसले १३ खेलमा १२ अंक जोडेको छ ।
Prevबर्दियामा संक्रमितकाे संख्या हजार नजिक
Nextकक्षा १२ काे परिक्षा : एक ब्यक्ति एक बेन्च
को’ रोनाबाट नेपालगन्जमा एकैघरका तीन दाजुभाइको मृ’ त्यु
स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रति प्रतिबद्व छाै – अध्यक्ष दाहाल
बढैयातालमा गाउँपालिकामा जारी दुई दिने आँखा शिविर कार्यक्रम भव्य रूपमा समापन
एक्कासी फेरी लकडाउन हुने मिती तोकियो, यति गतेबाट पुन देशमा लकडाउन सुरू हुँदै (395)
१.	भद्रकालीमा धर्ती माताको आठौ दिनमा यस्तो अनौठो भयो, माता नाग बनेपछि हेरेको हेरै भए सबै(भिडियो) (43)
२.	कञ्चनपुरमा एम्बुलेन्सले ठ’क्कर दिँदा साइकल यात्री ४५ वर्षीय कृष्णबहादुरको मृ’त्यु’ (39)